Akụkọ - 2019 FIC China International Ihe mgbakwunye nri na ihe Ngosipụta Ngwaọrụ
Na Machị 18-20, 2019 FIC China International Ihe mgbakwunye nri na ihe ngosipụta ihe emere na Shanghai, China. Global Ocean gara ngosi ahụ.
Dịka ọkachamara hydrocolloids na China na ihe karịrị afọ 20, Global Ocean na-adabere na teknụzụ nhazi ya dị elu na teknụzụ mmịpụta dị mma iji mepụta ngwaahịa ọ bụla nwere oke mma; anyị isi ngwaahịa bụ nri ọkwa agar, bacteriological agar, ozugbo soluble agar, carrageenan, agaro-oligosaccharide na ha compound ngwaahịa, ngụkọta kwa afọ mmepụta ikike nwere ike ruo 3000 tọn. Ngwaahịa anyị nyere ikike site na ISO, HALAL na KOSHER, nwekwara ike izute ụkpụrụ mba China na ụkpụrụ EU, ma ree ya na China dum ma kpụga ya na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Europe na America, wdg.
Ọnọdụ: Shanghai, China
Oge: 18 - 20 Machị, 2019
Booth Nke 52: 20F5 / 52G21
Ngwa nri China bụ ihe na - emetụta ma na - emekọ ihe ọnụ maka mgbakwunye nri na ụlọ ọrụ ihe eji eme ihe na Asia. Ọ gafeela afọ iri abụọ na isii emere mmemme a kwa afọ na mba Chaina. Ndị isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-esonye na mmemme a, na-adọta ọtụtụ iri puku ndị ọbịa ọkachamara. Kwa afọ, ọnụ ọgụgụ ndị so na ya na-arị elu. Ejiri FIC 2019 site na "18 March ruo 20 March, 2019", na Ngosipụta Ngosipụta na Mgbakọ Mba (Shanghai), China. Ewezuga ihe ngosi na ọrụ ọhụụ, ndị ọbịa yana ndị ngosi nwere ike isonye na usoro okwu nkuzi, nzukọ ọmụmụ teknụzụ, ọgbakọ nzukọ na ọgbakọ agụmakwụkwọ. N'ime ihe ndị a na-eme ka ihe ọmụma a pụta ìhè, ndị sonyere nwere ike nweta nkọwa doro anya banyere usoro mmepe ụlọ ọrụ nri, ọganiihu, ọnọdụ dị ugbu a, ihe ọhụrụ, usoro iri nri, ụkpụrụ na ụkpụrụ, na mmepe nke mgbakwunye nri.
Ha abụọ, ndị na-ebubata ngwaahịa na ndị na-azụ ahịa sitere na ahịa ụlọ na nke ofesi na-adị njikere ịnweta saga nke ngwaahịa ọhụụ ọhụrụ na teknụzụ, yana usoro nzukọ ọmụmụ na ọgbakọ, nke ị na-enwetụbeghị mbụ.